KGB ukusukelwa | yonke obungapheliyo
ithunyelwe ku amandla . karma . matrix . labantu . ukuvuseleleka . ekhombayo . izibakala
Oku akuyi aboniswe nkqu movie:
Uqubha ngamandla kwaye …
Kumazwe encinane elinabantu, ngokuqhelekileyo, ukuba 20 izigidi, iwonga abe inkonzo ngasese. Ngenxa yokuba nazo akukho bani owaziyo, ons magic, akukholeleki, engasoze kwaye njalo zingabanjwa. zingabanjwa Comprehensive izala inkohliso neentlobo wazo ulwaphulo-mthetho. Eli khoboka ngokuba uYesu ukuba akukho kudala inkxalabo, kunye umthombo kakuhle imali, leyo “esezansi kanye amavumba” kwanaxa idemokhrasi jikelele. Eyona nto imangalisayo, ukuba amakhoboka iindlela azinikezelwanga mda kwinani labantu.
Kumazwe ezinjalo, “neenkonzo ezizodwa amadimoni” phithi necebo eyodwa: “uncwelwe” lizwe “iimpethu”. Ukuze amandla fanele ukuba uninzi villains, ohlobene ngokwegazi, “namademoni ngasese” Bazama ukubaleka ngeembumba kwinani elikhulu “iimazi”. Ukuze bakwazi ukwenza oku,, nokuba, hlela ukudlwengula ekhaya, ukusebenza amaqela amakhulu. Ngelo xesha ngokwaphula umthetho nge sohlwayo ku “ubugebengu”. Baphupha uluntu, apho bonke abantwana lizwe zezi, wadlwengula besifazane, “namademoni ezimbi” Sebenzisa amanyathelo othintelo ekhoyo kunye ibetha phaya emva. Kwaye ngaphandle kokuthandabuza ukuze bandiqumbise imeko, apho abadlali (zamapolisa, njalo njalo. oogunyaziwe bezomthetho) kuza phezu abemi abaqhelekileyo. Ngapha koko,, amakhoboka axhobileyo abavumelekanga ukuba uxoxe imiyalelo, yaye abemi eziphanzileyo bangabi namandla okuma ukuthotywa.
Nangona ziinkanuko luthi – ungenza uvule ishishini. Ngapha koko,, iimazi “anamathele biznesyukam ngempumelelo”. Yiyiphi labo, weba isibini tie karhulumente. Kule mfihlelo akuthethi ukondla lizwe, nokwandisa “ishishini”. Inani inkunzi ekhohlisa ikhula zizazi, njengoko urhulumente “aceba”. Kuba karhulumente kunye nenkqubo yerhafu ikhona kuphela ukuba ziziyatha ongenamqolo. Yaye ngoxa Ziyatha “niyitshise ngomlilo” okanye “bengcangcazela ebumnyameni” – “inkqubo” ukuphila, yaye “ishishini” siya bacebe.
Kumazwe nge uhlobo ezahlukeneyo noosomashishini abaphumeleleyo na akasukanga ngokusemthethweni abafike umphefumlo, leyo ezingangqinelaniyo kunye nomjikelo opheleleyo zemisebenzi ezifunekayo ukuphumeza, kwaye azalwe ngeepateni esele zenziwe yokuziphatha kufuneka zifake amandla kunye nokonakaliswa ubomi.
guys nesibindi, ukuba, ngokuqhelekileyo, ruchkayutsya nge “amakhosi bravыmy” ngaphambi kokuba “uthweso-sitshaba”, ekucoceni izandla zabo phezu zonke kwiinkalo ekhoyo umsebenzi. Kwaye ukhuphiswano abanazo kuphela. Lobutshijolo ngazo kula kwizangqa “ikhono lokuphila”, kwaye ndini inkoliso nabantu nexoxo liyazigxumela ebomini.
Xa umntu lomakhwenkwe ayakudinga “ukuyivuthulula” ulwazi luncedo baza impikiswano, kuba becinga, ukuba “impikiswano ozelwe inyaniso”. nakuba, lutho, ngaphandle bekudla nobusela ulwazi ngexesha izithuko loo somnye, nga endleka. Iingxabano kudingeka nje ukuba, ukufumana ulwazi, ukufikelela apho umda okanye kungenzeki. ngokutsho kubuchwepheshe, udaka intambo e umdlali welinye icala, Ndidinga njengesizathu ukunika ulwazi oluluncedo, nto leyo edla isetyenziselwa uphuhliso kwezixhobo ezintsha.
Kokubili ne iindlavini, “zifincwe ngabangendawo” evela iinkonzo zokhuseleko okanye amafa “zifincwe ngabangendawo” Liyiqwalasele uphawu kwesithunzi “oyinto”, oluba ukuba ngamnye rarely kakhulu. Ngapha koko, zabo “magic nokungafumaneki” ngokufanele kuphela kakhulu “lugxile ukwanda Amazing”, leyo ukunikeza maninzi “wamatye zamafa”. Eyona nto imangalisayo, ukuba abo, ngubani bakwazi Uthatha lingcono, nevuso banoyolo zonke ezi meko iphikisana, Noko ke, sihlale kule. Zeta zeta emehlweni kakhulu. “izilwanyana ngaphezulu”, zikhwela iimazi ngaphakathi zenyathi yayo, bezama ukulimaza abanye ohlobo. Kulo mzekelo,, ukwazi imigibe eyahlukahlukeneyo namacebo, bahlukumeze imithetho wokuzalwa, libamba umzimba ngokwawo ngcono nokwenzeka mnandi, ngaphandle malunga nantoni. kufuneka bathobele anjenge ulwazi “unyango gumbini clinical”, ekufuneka inxaxheba njengoko abathwali wathelela.
“amadimoni ububi Special” ukumqumbisa izinto ezilungileyo kwi mthetho, kubazisa intiyo gxwa ezitsho eliphantsi, ngoncedo izixhobo ezikhoyo, ukuzimanyanisa ityala ngenxa yezono zabo kunye namacala. Emva koko ukuze bathi: “Nguwe ukhetho olufanayo fikalnoe bipedal njengoko!” ngaleyo, sahlala iinkonzo zokhuseleko, ukudala “uhlobo”.
“The Worlds uSathana top” ngokuzimeleyo qulunqa a ooThixo engasekhoyo, ukuba kuzuze bona bodwa. Kwaye ukuba wena unguThixo – kufuneka enze imimangaliso, ukuba banqula uSathana achaza ezincwadini zabo. ngenye indlela – poyschut yesibini. Konke oku kuxhaswa izihlwele ngamageza “okule”, leyo ifuna ukuba uThixo uzalisekisa yiminqweno yabo, Ukuba uthe akafuni ukwenza – Oku kuthetha inkohliso.
Isizukulwana esitsha Ham ngendlela ngendlela zombotuhoy. Zombie uza kuyeka kuphela emva, ukuba uqalise “sputter ngokuchanekileyo”. Ukondla abantwana ukuba babe nesidima ngokwanelisa abazali ukuba ifomu ukuxhomekeka ukutya, enza tinyiketela ku “i catering”. Uphando ngeendlela amandla ezinye umile de lokubulala, kunye neziphumo zophando makwazeke eziyimfihlo, eyaphinda elawula Ziyatha.
uyaganga kom- “abantu” Bayakuthanda ukuya kutyelela iindawo ezinabantu, eziguqulelwe kwi “hamsters isina”. “amaduna”, ngokuqhelekileyo, eletha “iimazi” ukuba idlelo, apho bazama ukuba basebenze njengabagunyaziswa nezinye “amaduna”, abonisa ebelihlasela “nelungelo” ezihambisana. Nakuba “female” sanda “indawo” izithembiso ngokwasemoyeni lomtshato ukuba anandise – “hamsters nelungelo” ibonisa impendulo asabela “amaduna”. Ngoko razrostaetsya igwiba Satanism. Kwaye uninzi “iimazi” ufihle nje kule iiyadi, ukuba Ngeningalifumananga. Nangona ukusetyenziswa yandayo amandla yesiqalo, “hamsters” uphambuke imisebenzi yophando esisinyanzelo. Koko ubuze factor imizimba yazo idla infinity, kwaye umzimba akukho mfuneko. Kule enohlobo wagwetywa ekuthinjweni zonke, nongavumanga “inkqubo sesevisi pilot”. kunjalo, mhlawumbi, ukuziphatha kwabo kungenxa yokuba, ukuba “izilwanyana ngaphezulu” olu hlobo iqabane kunye ewayo eludakeni “iihagu eziphezulu, chervyami, iimpethu, amaphela nezilwanyana”, ngenxa yokuba efana itsala ngathi.
abafundisi ukuvelela, iinkonzo zokhuseleko evunyiweyo, kunokuba, ukufezekisa umsebenzi wabo ekhawulezileyo, Bakhetha ukuba atshabalalise intelligence enokubakho ezo wadi, amandla amakhulu iingongoma zokufundisa ku 100-900 amawaka. Ngenxa kule nkqubo isporozhnyaetsya yemfundo “izikwere abamnyama”. Ukuba ingqondo asike ukuya kwinqanaba ngezimnyama zokuzila kucwangciselwe akuphumelelanga – ezinjalo “umzimba” uzama ukuba bahlukane sele ukuqhubekekiswa, ukunqanda imbonakalo ithuba wokukhanya kwixesha elizayo. of “ubuchopho elikhanyayo” nedoprepodavateli uzame ukudibanisa zonke iingxaki kunye neengxaki zakho, achitha ndlela, ubomi babo kuba lula kancinci wayizalisa ngemvakalelo okwexeshana kunabanye. nokuba, ukuba umfundi okuqaqambileyo akunanto yakwenza iingxaki yokufundisa – kunjalo “wathulula karma somnye” ngaphandle isilumkiso, kuba akukho namnye unako ukuloyisa. Inxalenye, oku kwenziwa ukuze, ukwenza abafundi, ongaba okhuphisana kakhulu, Ukwehluleka inzululwazi kunye nemithetho yendalo. bafundisi akalutho bagwetyelwe mthetho ekugcineni.
ngaleyo, ngo “imihlaba kaSathana” ukubaluleka kuphela inkqubo zemali kaSathana kunye namaziko karhulumente. Eyona nto ibalulekileyo, indlela amafutha kwiwalethi nendlela ngokukhawuleza ihlawulelwa balo babulingana nesandla, kwaye kungekho eendaba zingaphi iityhubhu okanye iinzwane-niphume sokumpompa zomfana. Ubuncinane babe ixabiso ukukwazi kwakho yengqondo, kodwa loluthando ukuzibandakanya obfuscation zangasese zaseprayimari. Kubaluleke kakhulu ukuba umnqweno ukuba osemtsha abadala, ukuba ndibhaptize ngokukhawuleza ngokwabo kuzo zonke iintlobo yokungcola.
ngobukhulu “yokwamkelwa” abantwana ezinokuba babe neenkonzo ezizodwa. Ndiyila iqela elithile ukuba phantse kusukela ezalwa sele uzama “sigawula” ontanga babo, nokukha ulwazi oluluncedo, onako ukwenza iingeniso kunye nendawo siqinisekile kuluntu kunye nokukwazi ukulawula it. Ngokungafaniyo abantwana abakwaziyo, bona, kwakunye nabazali babo abadala, ze “ukudlala” ngokunyaniseka. Ukuzama ebuntwaneni “donsa eludakeni” yonke into kunye engcono kakhulu elihle, owawufikelela ukuya. It is hhayi ngaphandle, ukuba kusenokuba kukho abantu abaqhelekileyo.
Odlayo umjikelezo imisebenzi yayo ebalulekileyo luncedo Energy cosmic, “iintwala ejiyileyo” yaye “prolupivshiesya noonomoyi” befuna ukuba ukumisela ulawulo phezu kwicandelo amandla, ukukhusela imithombo yengeniso yabo. Nangona, umbulelo kule mandla ukuphunyezwa yonke imijikelo yobomi, Oku kuquka kuphela ngokwanelisa iimfuno zendalo eziphilayo (emehlweni, motion, tantra, saturation, ukudandatheka, njl ..), kodwa imisebenzi kwakhona enxulumene ebangela amathuba ubomi obutofotofo, iintlobo ezahlukeneyo amandla apho enikezela Space Infinite (ugesi, umlilo, zemagnethi), Ubukho kunye nobuthixo i Infinite Cosmos, kunjalo, ayibonwa. mhlawumbi, ngenxa yokuba, ukuba “ukuncokola” uyakwazi ukubona kuphela, kwehlula kuye “ryahu”. and, ukuthethelela yezikhundla zabo kwaye ufake ukudideka obonisa, baya kuthinjwa bemke amajelo siko TV kwaye ziqulathe yonke, ngokuba ngubani ofuna nesandla “satanynskomu shop”. ngempela, efanele umsebenzi isipho “Fika”. Jonga wena esipilini – nto ibonakalisa inyaniso.
Kuba ukusebenza kakuhle kwezakhiwo ezineziphene eziququzelelwe banqula uSathana ukubona ukuba, ukuze ubutyebi namandla yawa ezandleni yezidenge kakuhle elawulwa. Inkqubo siqala lizele romanticism wayevuma genetic “satanynskyh iimazi” ukuba zizale nayiphi “yemoto” kwaye eqhelekileyo, leyo kwasuka kumaxesha amandulo (ekubeni kuAzazele, umzekelo).
Ukuba isakhiwo ziziphene kwatyatyamba iinkqubo wakhangela zendalo, Abaququzeleli bayo nabalondolozi wayifihla “iseli ezimweni akunakwenzeka”, hayi enkosi azuzwe ukuba ntoni “inkqubo amakhoboka”.
Ngenxa yomsebenzi entsonkothileyo izakhiwo ezineziphene ochazwe ngaphambili ezingqonge ihlabathi badl 'ukufika, leyo landisa ubuze kwaye engenathemba. Ngenxa yobume yehlabathi umonakalo sijinga phezu ngaphambi, lwabasunguli zayo bantsebenzo abazinikeleyo wagwetywa “ekuthinjweni boqobo”. Oku ukuba nazo.
Le kenowolo, leyo kudala kwi Ubumnyama “brown” imvuthuluka. Ukungcola akuthethi hombisa ubumnyama.
Ingaba ukulungele “zdohnut” iBhodi, abantwana bakho bahlala ubukhoboka?
~ "* ° ☸ Okean Elzi - Bilshe dlya Nkathazo ☸ ° * "~
Ukuba kungenzeka “ububi” – Oku kuthetha nokuba niyitshabalalise ngokwam, okanye uya kutshatyalaliswa kunye nawe, kodwa, kungenzeka, oko uya kukudiliza.
Imbalela umhlaba phantsi kweenyawo zabo “amathe waya entabeni esibhakabhakeni” – isiqalo okulungileyo Yehlabathi Elitsha! ((( )))
• ● ⊡ ☆ Oliver Shanti – High ePhakamileyo kunye ☆ ⊡ ● •
February 2013 kunyaka kwikhalenda Gregorian.
izimvo ( 0 )